Cadhada kulul ee Kenya maxay salka ku haysaa? | Saxil News Network
Cadhada kulul ee Kenya maxay salka ku haysaa?
“Waxaa jira shirkaddo dhaqaale badan haysta oo doonaya in ay maalgashadaan shidaalka badda, Kenyana waxay diidan tahay in shirkadahaasi ay dib u istaagaan oo dhaqaalahaasi ka baaqdo, ayuu yiri qareen Soomaaliyeed oo si dhaw ula socda dacwadda badda iyo waxyaabaha kale ee ku xeeran”, balse ka gaabsaday in uu magaciisa sheego.
Askari Maraykan ah “oo qorsheeyay weerar argagixiso”
“Xadgudubkan aan wax loo dhiga lahayn ee sida sharci darrada lagu xoogayo hantida dadka reer Kenya, ma ahan mid laga aamusi karo, wuxuuna u dhigmaa fal cadawtinimo oo ka dhan ah dadka reer Kenya iyo hantidooda,” ayuu yiri Xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Macharia Kamau.
Wasiirradda Arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo shir jaraa’id qabatay shalay ayaa sheegtay in ay Soomaaliya uga fadhido raali galin.
“Dalal ayaa dagaal u gala waxa ay Soomaaliya nagu samaysay wax ka yar balse waan is xakamaynaynaa” ayay tiri Monica.
“Ka sharci yaqaan ahaan waxaan fahamsanahay in ay u badan tahay in maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda ay labada dal ka codsato in ay isa soo xalistaan, Kenyana waxay hadda ka sii shaqaynaysaa in wakhtigaas la gaaro iyadoo culays saaran yahay Soomaaliya” ayuu yiri qareenkaas Soomaaliyeed ee magaciisa ka gaabsaday.
Feebaraayo 02, 2018: Maxkamadda Cadaaladda ee Qaramada Midoobay ayaa go’aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Xaakimiinta Maxkamadda ayaa u codeeyay kiiska ka dib markii ay ka hadleen sharci ahaanta doodda Soomaaliya iyo diidmada Kenya.